हेर्नुहोस आजको राशिफल : वि.सं. २०७७ फाल्गुन ०६ गते बिहीवार ! – Khabarhouse
हेर्नुहोस आजको राशिफल : वि.सं. २०७७ फाल्गुन ०६ गते बिहीवार !
Khabar house | ६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०१:३७ | Comments
ज्योतिषि डिपि भण्डारी : वि.सं. २०७७ साल फागुन ०६ गते । बिहीबार । इस्वी सन् २०२१ फेब्रुअरी १८ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । प्रमादी संवत्सर । उत्तरायण । शिशिर ऋतु । श्रीशाके १९४२। माघ शुक्लपक्ष । तिथि–षष्ठी, ०१ घडी, बिहान ०७ बजेर ०५ मिनेट उप्रान्त सप्तमी । काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर ४० मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर ५६ मिनेट । दिनमान २८ घडी ०८ पला ।
मेष : सामाजिक कामहरु समयमा गर्न सकिने हुँदा मानसम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ । रोकिएर बसेका कामहरु सजिलै सम्पादन गर्न सकिनेछ भने आर्थिक रुपमा सुदृड हुने समय रहेको छ। विद्यार्थीहरुले आफ्नो प्रतिस्पर्धी लाई सजिलै किनारा लगाउँदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सक्नेछन् । व्यापार व्यवसायबाट मनग्य धन सम्पत्ति कमाउन सकिने हुँदा आवश्यकतहरु परिपूर्ति हुनेछन् । सुन्दर तथा वि’लाशी वस्तुको प्रयोग मार्फत अरुको मन आफूतिर खिच्न सकिनेछ ।
बृष : अस्वाभाविक खर्च बढ्ने हुँदा मन चिन्तित रहनेछ । शारीरिक क’ष्ट तथा आँखामा सम’स्या देखिन सक्छ । मान, सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठा गुम्ने खतरा रहेको छ सजक रहनुहोला । व्यापार व्यावसायमा नाफा कमाउन निकै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ला । विद्यामा सोचेजस्तो प्रगति गर्न निकै समय कुर्नु पर्नेछ । आफन्त तथा परिवारजन तपाईंदेखि टाढिन सक्छन् । तर पनि वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यावसाय भने फ’स्टाएर जानेछ ।
मिथुन : आम्दानीको तुलनामा खर्च कम हुनेहुँदा फाइदा हुने क्षेत्र खोजेर लगानी गर्न सकिनेछ । व्यापार तथा सेयर बजारमा गरेको लगानी फ’स्टाएर जानेछ भने पै’त्रिक धन सम्पत्तिको परिचालनको माध्यमबाट मनग्य लाभ लिन सकिने छ । राजनीतिमा लाग्नेहरुले राज्यबाट विशेष सेवा सुविधा पाप्त गर्न सक्नेछन् । पढाइलेखाइ प्रगतिकै बाटोमा अगाडि बढाउन सकिनेछ भने वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामहरुबाट प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ ।
कर्कट : लामो समयदेखि रोकिएर बसेका कामहरु बन्नेछन् भने तपाईंको काममा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरु आफै किनारा लाग्ने छन् । पढाइ लेखाइमा प्रशस्त समय दिन सकिने हुँदा भने जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ । नयाँ काम पाउने तथा नोकरी बढोत्तरीको गतिलो योग रहेको छ । लगनशील तथा इमानदारिताले समाजका मानसम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ । प्रे’म प्रसङ्गको गाँठो क’सिलो भएर जानेछ भने नयाँ ठाउँबाट प्रे’म प्रस्ताव आउने अधिक सम्भावना रहेको छ ।
सिंह : लामो दूरीको धा’र्मिक तथा शैक्षिक यात्राको अधिक सम्भावना रहेको छ । नोकरीमा बढुवा हुने तथा अनुकुल स्थानमा स्थानान्तरणको अधिक सम्भावना रहेको छ। खोज तथा अनुसन्धानमा खर्चिएको समयबाट भने जस्तो नतिजा आउने हुँदा मन खुशी रहनेछ । माया प्रे’ममा सा’मीप्यता बढेर जानेछ भने घरमा पति प’त्नी बीच विश्वासको वातावरण बढेर जानेछ । धार्मिक प्रतिष्ठान तथा मन्दिरको यात्रा गरी टीका तथा प्रसाद ग्रहण गर्न सकिनेछ ।
कन्या : व्यापार व्यावसायमा आजको दिन लगानी नगर्नुनै राम्रो हुनेछ । स्वास्थ्यमा स’मस्या आई उपचार खर्च बढेर जानेछ। विद्यामा सफलता पाउन मिहिनेत गर्नुपर्ला । दिदी बहिनीबाट सहयोगको आश्वासन मात्र प्राप्त हुनेछ। भौतिक सम्पत्ति तथा रुपैया पैसा हराउन तथा लुटिन सक्छ ध्यान दिनुहोला । आर्थिक अप’चलनको मु’द्दा मामिला आइलाग्न सक्छ, काम गर्दा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । तर पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गरिएको लगानीबाट सन्तोषजनक नाफा हुनेछ ।
तुला : आफ्नो क्षमता प्रयोग गरी अरुको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ भने मान सम्मानमा वृद्धि भएर जाने छ । मानव निर्मित भौतिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न पाइने तथा विलासी जीवन व्यातित गरी रमाउने समय रहेको छ । जीवन साथीसँग रमाइलो यात्राको तय गर्न सकिनेछ भने एकल तथा साझेदारी व्यावसायबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ ।
बृश्चिक : पुराना समस्या तथा विवा’दित विषयहरुलाई केही समय दिएर सकाउन सकिनेछ । रुपैया पैसा बचत गरी नयाँ व्यापार व्यावसायमा लगानी गर्न सकिनेछ। घर, परिवार तथा सामाजिक निर्णयहरु तपाईंकै पक्षमा हुने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ । पढाइ लेखाइमा सामान्य प्रतिस्पर्धीहरु आफै साइड लाग्नेछन् । आफ्नो विशेष मान्छेलाई लिएर यात्रामा निस्कन सकिनेछ भने प्रेममा नजिक हुने समय रहेको छ ।
धनु: प्रयत्न गर्दा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछ भने व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी मनग्य आम्दानी गर्न सकिनेछ। स्कुल कलेज, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट भनेजस्तो लाभ लिन सकिनेछ। सेयर बजार तथा सट्टाको व्यावसायमा विशेष लाभ लिन सकिनेछ । माया प्रेममा एकअर्कालाई विश्वास गर्नाले सम्बन्ध सुदृड हुनेछ । भौतिक सम्पत्ति तथा वि’लाशी वस्तुको उपयोग मार्फत मनग्ने धन सङ्ग्रह गर्न सकिनेछ ।
मकर : जीवनशैली व्यास्त भए पनि आर्थिक रुपमा पछि नै परिनेछ । आमा तथा आफ्नैबाट टाडिनुपर्ने बाध्यता आउनेछ भने कामको सवालमा देश परदेशको यात्राको तय हुनेछ । अध्ययनमा समय दिन नसक्दा सफलता चु’म्न निकै मुस्किल पर्नेछ । माया प्रे’ममा सामान्य मन मु’टाव सिर्जना हुनेछ भने साथीभाइले नै धोका दिन सक्छन् । स्थायी सम्पत्तिमा विवाद आउनेछ । तर पनि कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय भने व्यावसाय फस्टाएर जानेछ ।
कुम्भ : दाजुभाइ तथा छिमेकीबाट तपाईंले सुरु गरेको काममा सहयोग तथा समर्थन हुनेहुँदा मन प्रसन्न हुने छ । छोटो दूरीको व्यावसायिक यात्राको अधिक सम्भावना रहेको छ । व्यापार व्यावसाय फ’स्टाएर जाने हुनाले थप लगानी गर्न आँट आउनेछ । माया प्रेममा एक अर्काको भावना बुझ्न सकिने हुँदा थप प्रगाडता बढेर जानेछ । पढाइ लेखाइ प्रगतिकै बाटोमा अगाडि बढ्ने योग रहेको छ ।
मीन : बोलीको प्रभाव बढ्ने हुनाले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु आजको दिन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पारिवारिक जमघटमा दिन बित्ने तथा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । पति प’त्नी तथा माया प्रे’ममा सामी’प्यता बढेर जानेछ । कुटु म्बबाट तपाईंले गरेको काममा सहयोग प्राप्त हुनेछ । पढाइलेखाइमा सफलता हात लाग्ने योग रहेको छ । व्यापार व्यावसायबाट प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ । तपाईंको दिन शुभ रहोस् ।